Kukholelwa ukuthi abashayeli bamakhadi wehluzo ze-NVIDIA akudingeki basuswe. Isibonelo, uma kuthuthukiswa izinguqulo ezindala kufakwe esikhundleni esisha ngokuzenzakalelayo. Kodwa-ke, naphezu kwalendlela, kwezinye izimo kukhona ukuhluleka okuhlotshaniswa nezibuyekezo, noma izinkinga zesistimu (izingxabano zomshayeli) uma ushintsha ikhadi levidyo. Futhi umbuzo omkhulu kakhulu ukukhipha umshayeli we-NVIDIA ngokuphelele. Ngezansi uzothola izindlela ezilula futhi ezisheshayo zokwenza lokhu kunoma yimuphi umsebenzisi.
Ngikhipha kanjani umshayeli we- NVIDIA uma kuthuthukiswa?
Ake siqale ngokulula. Ake sithi ukuvuselelwa okuzenzakalelayo ngesizathu esithile akusebenzi. Yini okufanele uyenze kulokhu?
Okokuqala, landa umshayeli omusha kusayithi lomthuthukisi olusemthethweni, bese ugijima uhlelo lokufaka. Lapho iwindi lokukhetha uhlobo lokufakwa livela, sisebenzisa ukufakwa okukhethiwe, emva kwalokho sichaza ukufakwa "okuhlanzekile". Bese ulinde ukuphela kwenqubo. Kulesi simo, ungaqiniseka ngokuphelele ukuthi amaphrofayili amadala kanye nabashayeli bazosuswa ngokuphelele ohlelweni futhi bafakwe esikhundleni senguqulo entsha.
Indlela yokususa ngokuphelele umshayeli: inqubo evamile
Kodwa kufanele ukwenze uma izinkinga zingasombululwa ngendlela echazwe ngenhla. Ungasusa umshayeli kusuka kuMphathi weDivaysi, kodwa uhlelo luzophinde lufake lapho luqala kabusha. Kulesi simo, kufanele usebenzise ingxenye ejwayelekile yezinhlelo nezinxenye kuPhaneli Yokulawula.
Ngikhipha kanjani umshayeli we-NVIDIA? Kulula kakhulu! Kudingeka ukhethe zonke izingxenye ze-NVIDIA, uzihlenge ngegama lonjiniyela, bese usebenzisa inqubo ejwayelekile yokukhipha. Kubalulekile ukucabangela ukuthi ngale ndlela ukususa akuhambi ngaso sonke isikhathi kahle. Okokuqala, ukususa ingxenye ngayinye ngesandla kuyinde kakhulu. Okwesibili, akuzona zonke izingxenye ezikhishwayo (kunamafayela amaningi edoti, amarekhodi ku-registry system, njll). Khona-ke ukubheka konke okusele ngemuva kokukhipha, kuwumsebenzi ongabongi.
Ukusetshenziswa kosizo olukhethekile
Kungcono ukucela usizo ezinhlelweni ezikhethekile ezizokwenza wonke umsebenzi womsebenzisi wekhompyutha. Omunye kungenzeka, weluleke uhlelo lokusebenza lwe-Driver Sweeper, kodwa lusebenza kuphela ku-Windows 7 nezinguqulo zangaphambili zesistimu, kodwa ukuguqulwa kwesishiyagalombili neshumi akusekeli. Kanjani ukungena?
Ngenxa yalesi simo, inkinga yokukhipha umshayeli we-NVIDIA ngokuphelele futhi ixazululwe ngokuphelele ngokusebenzisa uhlelo lokusebenza jikelele lokubonisa ukukhipha umshayeli. Nokho, kubalulekile ukwenza zonke izenzo kuphela kwimodi ephephile. Lolu hlelo lubeka ngokuzenzakalelayo imodi yokuqalisa ye-system futhi ngesikhathi sokuqala evamile kwenza umsebenzisi ahambe ku-Safe Mode. Okulandelayo, Umbuso uthola ngokuzenzakalelayo zonke izingxenye ezitholakalayo futhi uzikhiphe ngaphandle kokungenela komsebenzisi. Lolu hlelo lokusebenza lubuye lube lula ngoba lukuvumela ukuba wenqabe ngisho nokusetshenziswa kwe-PhysX.
Isisombululo esithakazelisayo esifanayo senkinga yokususa umshayeli we-NVIDIA ukusebenzisa uhlelo olunamandla kakhulu lwe-iObit Uninstaller. Uma ubheka isigaba sohlelo, uzobona ukuthi kufana nokubuka okujwayelekile kwe-Windows partition efanayo. Umehluko wukuthi ungakwazi ukukhetha ngokushesha zonke izingxenye, khona-ke inqubo yokukhishwa okujwayelekile izoqala, bese kuthi ukukhipha okunamandla kuzokwenzeka, lapho kuzokwenziwa khona wonke amafayela ashicilelwe kanye nezihluthulelo zokubhalisa. Ukuqedela inqubo yokukhipha, kumele ususe zonke izinto ezitholiwe bese uhlola ibhokisi ngokususa amafayela.
Yilokho konke, ngokususwa kokushayela abashayeli. Lezi zixazululo, ezisebenzisa izindlela ezijwayelekile nezinhlelo ezikhethekile, azisebenzisi kuphela kumikhiqizo ye-software ye-NVIDIA ne-chips ihluzo. Kungasetshenziselwa kalula ukukhipha abashayeli bamanye amadivaysi, futhi IObit Ukukhipha - nakwezingxenye zesofthiwe, ukungakhulumi ngezinhlobo ezahlukene zamapaneli kuziphequluli, njalonjalo.
Izindlela ezahlukene zokususa i-iObit kusuka kukhompyutha yakho
Njengase-"Photoshop" ukwenza isithombe esimnyama nesomhlophe, kufaka phakathi nezakhi ezinemibala
Indlela yokususa uhlelo kusuka kukhompyutha.
Indlela ukuxhuma polustolbik sc, sc ikholomu futhi ngaphandle
Biography Ostroumova Olga - actress yisakhiwo sodumo
Izidakamizwa Kuchazwe 'Solkovagina': ukubuyekezwa kanye izincomo lokusebenza
Warsaw Chopin Airport yigama